| ५:००:५७ मा प्रकाशित
वि.सं.२०७८ साल जेठ २२ गते शनिबार । ईश्वी सन् २०२१ जुन ०५ तारिख । नेपाल संवत् ११४१ । राक्षस संवत्सर । उत्तरायण । ग्रीष्म ऋतु । श्रीशाके १९४२ । जेठ कृष्णपक्ष । तिथि– दशमी,०३ घडी ५३ पला, बिहान ०६ बजेर ४३ मिनेट उप्रान्त एकादशी । नक्षत्र–रेवती,५१ घडी २५ पला,रातको ०१ बजेर ४४ मिनेट उप्रान्त अश्विनी । योग–आयुष्मान, ०१ घडी ५५ पला, बिहान ०५ बजेर ५६ मिनेट उप्रान्त सौभाग्य । करण– भद्रा, बिहान ०६ बजेर ४३ मिनेट उप्रान्त बव,बेलुकी ०७ बजेर २० मिनेट उप्रान्त बालव । आनन्दादिमा–धाता योग । चन्द्रराशि–मीन । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ०५ बजेर ०९ मिनेट,सूर्यास्त बेलुकी ०६ बजेर ५६ मिनेट । दिनमान ३३ घडी २४ पला । विश्व वातावरण दिवस ।
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) :- न्यून पारिश्रमिकमा दिनभर समय व्यतित गर्नुपर्दा अन्य काममा समय दिन सकिने छैन । काम गर्दा साबधानी अपनाउनुहोला खराब व्यक्तिको बिश्वास गर्नाले जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । पढाईलेखाईमा मन नजाने हुनाले अरु भन्दा पछी परिनेछ भने माया प्रेममा एक अर्का बीच बैमनस्यता बढ्नेछ । तरपनि प्रविधिको प्रयोग मार्फत अध्ययनलाई निरन्तरता दिन सकिनेछ । विदेशमा बसेर काम वा अध्ययन गर्नेहरुका लागी समयले साथ दिनेछ ।
बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) :- सामाजिक क्षेत्रमा तपाईलाई सबैले मान्नेछन् भने नेतृत्व लिनु पर्ने अवस्था आउनेछ । जनताको कामहरु समयमा गर्न सकिने हुनाले ईज्जत प्रतिष्ठा बढेर जानेछ । प्रेममा उच्च सफलता प्राप्त हुनेछ भने लामो समय देखिको प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्ने सहमति आफन्तबाट प्राप्त हुनेछ । दैनिक उपभोग्य बस्तु ,औषधी तथा अनलाईनबाट सप्लाई हुने सामानको व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ ।
मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) :- औषधीजन्य तथा खाद्यान्नसँग सम्बन्धीत सामानको उत्पादन तथा व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ । मायाप्रेममा नजिक भई आफ्ना आफ्ना भावना साटासाट गर्न सकिनेछ । बिद्या तथा प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धीहरुलाई किनारा लगाउदै नतिजा ल्याउन सकिनेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको साथ तथा समर्थन प्राप्त हुने योग रहेकोछ ।
कर्कट (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) :- पढाईलेखाई बिद्यार्थीहरुले राम्रो प्रगती गर्ने समय रहेको छ । धर्म तथा अध्यात्म क्षेत्रमा रुची बढ्नेछ । मायाप्रेममा नजिक भई आफ्ना आवना साटासाट गर्ने अवसर जुर्नेछ । सरकारी तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा तपाईका सहभागिता उच्च स्तरको रहनेछ । कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा लगानी गरि राम्रै आम्दानी गर्न सकिने छ ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे) :- व्यापार व्यवसायमा लगानी नगर्नु नै उचित हुनेछ आजको दिन घाटा लाग्ने योग रहेको छ । परिवारमा आफन्त तथा पतिपत्नीबीच विवाद बढ्नेछ भने चेलीमाईतीबीचको सम्बन्धमा फाटो ल्याउन आफन्तहरुनै लागी पर्नेछन् । तरपनि दैनिक उपभोग्य बस्तु ,औषधी तथा अनलाईनबाट सप्लाई हुने सामानको व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ । सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोग मार्फत आफ्ना भनाई वा लेखहरु जनमानसमा लैजान सकिनेछ ।
कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो) :- तार्किक क्षमताबा बृद्धि भएर जानेछ भने बाणिमा थप निखारता आउने हुनाले नाम तथा दाम दुवै कमाउन सकिनेछ । मायाप्रेममा नजिक हुने समय रहेको छ भने बिपरित लिङग प्रतिको आकर्षण बढेर जानेछ । पढाईमा अरुभन्दा एक कदम बढी सफलता हात पार्न सकिने छ । औषधीजन्य तथा खाद्यान्नसँग सम्बन्धीत सामानको उत्पादन तथा व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ भने अन्य क्षेत्रमा गरिएको लगानीमा मन्दि आउनेछ ।
तुला (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते) :- आफन्तका साथ रमाईलो गर्दै मिठा मिठा परिकार ग्रहण गर्दै दिन कटाउन सकिने छ । अदालती निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा आउने तथा सत्रु परास्त गर्दै अगाडी बढ्न सकिने छ । प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धीको मनोबल गिराउदै सकारात्मक उपलब्धी हात पार्न सकिनेछ । पुराना स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या हल भएर जाने तथा पुराना लेनदेनका मुद्दाहरु किनारा लाग्नेछन् । अध्ययन अध्यापनमा सुधार हुनुको साथै पुरस्कार जित्न सकिने छ ।
बृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू) :- सन्तान बृद्धिको योग रहेको छ धन सन्तानको प्रगती देख्न पाईनेछ । धर्म शाष्त्र तथा अध्यात्म ज्ञानमा बिषेश चासो बढ्नेछ । प्रेम गर्ने जोडिहरुले आफ्ना भावना खुलेरै साटासाट गर्नको लागी समयले साथ दिनेछ भने उपहार पाईने हुनाले मन प्रशन्न हुनेछ । नोकरीमा बढुवा हुने योग रहेको छ । प्रविधिको प्रयोग मार्फत अध्ययनलाई निरन्तरता दिन सकिने छ ।
धनु (ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे) :- घर जग्गा तथा पैत्रिक सम्पतीमा विवाद बढ्ने ग्रहयोग रहेको छ भने सवारीसाधनको प्रयोग गर्दा ख्याल गर्नुहोला नसोचेको घट्ना घट्न सक्छ । राजनीति तथा समाजसेवामा तपाईको प्रभाव कमजोर भएर जानेछ । उच्च महत्वकांक्षाले समस्या निम्तन सक्छ ध्यान दिनुहोला । प्रेममा सामान्य विवाद बढ्नेछ । तरपनि प्रविधिको प्रयोग मार्फत अध्ययनलाई निरन्तरता दिन सकिनेछ ।
मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) :- परिवारका साथ रहेर मिष्टान्न भोजन लिने अवसर मिल्नेछ । तपाईले सुरु गर्नुभएको कामको दाजुभाई तथा छिमेकिबाट उच्च मुल्याङकन हुने ग्रहयोग रहेको छ । दैनिक उपभोग्य बस्तु ,औषधी तथा अनलाईनबाट सप्लाई हुने सामानको व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ । आफ्नो प्रिय पात्रलाई आफ्नै वरिपरी देख्न पाउदा मन प्रशन्न रहनेछ । विवादित विषयहरुको नतिजा तपाई आफ्नै पक्षमा आउने हुनाले मन प्रशन्न हुनेछ ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा) :- पारिवारिक वातावरणमा रमाउदै स्वादिष्ट भोजन ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नेछ । सामाजिक तथा कल्याणकारी काम गरी समाजमा नाम कमाउन सकिनेछ । थोरै बोलेर वा बोलीकै माध्यम बाट धेरै कामहरु गर्न सकिनेछ । धातु तथा खनिज पदार्थसँग सम्बन्धीत व्यवसायबाट लाभ लिन सकिनेछ । प्रविधिको प्रयोग मार्फत अध्ययनलाई निरन्तरता दिन सकिनेछ ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) :- राजनीति तथा कल्याणकारी कामबाट समाजबाट नाम तथा दाम कमाउन सकिनेछ । पढाईलेखाईमा अरुभन्दा एक कदम अगाडी बढी नतिजा हात पार्न सकिनेछ । प्रेममा एक अर्कालाई बिश्वास गर्न सकिनेछ भने जीवनसाथिको सहयोगले राम्रा काम गर्न सकिनेछ । सुन्दर पहिरनमा सजिएर अरुको मन आफुतिर लोभ्याउन सकिनेछ । औषधीजन्य तथा खाद्यान्नसँग सम्बन्धीत सामानको उत्पादन तथा व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ भने अन्य क्षेत्रमा गरिएको लगानीमा मन्दि आउनेछ । तपाईको दिन शुभ रहोस् ।
अमेरिकाको अलाबामामा भएको दुर्घटनामा परी ९ बालबालिकासहित १० को मृत्यु २ मिनेट पहिले
नेपाल इन्स्योरेन्सको शेयरमा ३ लाख १७ हजार कित्ता खरीद माग ९ मिनेट पहिले
रिलायबल नेपाल लाइफको आईपीओ रेटिङ सम्पन्न २५ मिनेट पहिले
यी हुन् माओवादी केन्द्रबाट निश्काशित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु ३२ मिनेट पहिले
आज बजारमा कतिमा भइरहेको छ सुनको कारोबार ? ४१ मिनेट पहिले
राइफल पड्किएर ड्युटीमै रहेका सेनाका जवान घाइते ४९ मिनेट पहिले
रक्तचापको श्रेणी कसरी थाहा पाउने ? ५४ मिनेट पहिले
आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस, देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै ४ घण्टा पहिले
पानीजहाजको सब स्टेशन निर्माणस्थल निरीक्षण २३ घण्टा पहिले
अब काठमाडौं उपत्यकामा बार अनुसार पसल खोल्न पाइने १९ घण्टा पहिले
वालिङ नगरपालिकामा बंगुर पकेट कार्यक्रमको घोषणा, निःशुल्क पाठापाठी वितरण गर्दै उपप्रमुख तिवारी ३ दिन पहिले
अमेरिका बस्ने नेपालीले पठाए स्वास्थ्य सामग्री ७ दिन पहिले
गल्फागाड गाउँमा भाइरल ज्वरोका बिरामी बढे ७ दिन पहिले
उदयपुरको गाइघाट बजार बाढीको उच्च जोखिममा ४ दिन पहिले
१९ कम्पनीको सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार, शेयरमूल्य कुनको कति ? ४ हप्ता पहिले
आज निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने १,६९५ वटा सवारीसाधन नियन्त्रणमा ३ हप्ता पहिले
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्धामा एक जना पक्राउ २ हप्ता पहिले
चन्द्रागिरि हिल्सको शेयरमा सकारात्मक सर्किट, मंगलबार २१३ रुपैयाँले बढ्यो मूल्य २ महिना पहिले
शिकार खेल्न हिँडेका ४ जना भरुवा बन्दुकसहित पक्राउ १२ महिना पहिले
ग्वान्जाओका लागि वाइडबडी उडदै १ वर्ष पहिले
सरकारी वार्ता टोली र डा.केसीका प्रतिनिधिबीच पहिलो वार्ता हुदैँ ८ महिना पहिले